Fanka toosinta shaqsiyadeed - Wikipedia
Fanka toosinta shaqsiyadeed
Qaacidoyinka Xalinta Caqabadaha.
1. 1 Mushkiladu waa dhibaato iyo caqabad aad rabtid in aad ka gudubto.
Asalka nolosha waa Daal iyo dhibaato, aduunkana lagama helayo qof aaney soo wajahin caqabado iyo mushkilado,
2. Dadka marka loo eego sida ay uwajahaan mushkiladaha waa ay kala gadsantahay kuwa ayaa ka guulaysta dhibaatooyinka soo wajaha oo si wanaagsan uxaliya kuwan waa ay ku adkaataa, qaarna waa ay isu dhibaan adhibata soo food sartay kaana waa caajsilow, ugu danbeytana waa uu quustaa hase ahaatee waa ogyahay in mushkiladi haysato, mana yaqaano xalkeeeda. Waxaa jira qaar kale oo ay soo food saarto dhibaato ama mushkilada oo aan ogayn waxa hayo, waana uu isku dayaa in uu xaliyo dhaibatada soowajahday hase ahaatee majoogtaynayo xalkiisa.
3. Macnahu ma ahan in aad hal xal oo kaliya in aad raaadiso shareecada islaamkana waxaa ay latimid qabab farabadan oo aad ku xalin karto dhibaatadaada.
4. Nolosha muslimka ma ahan shar oo kaliya waxaana laga maarmaan ah in ay lahato qeyr wajigay rabtaba ha ahatee, waxaana ka mid ah (maxabatu laahi,i stiqfaar in aad dareentid nimcada alle kugu galadsaday, in aad garato xaqiqada aduunyada, ka caado dhigo in aad sheegto waxyaabah wanaaga ah, ku qancid wixii allah uu kuuqoray ee ku soogara, waxaa kale oo muhiim ah in aad barato nolosha dadka kugu heeran iyo in aad baarto rabitanadooda, si aad u hanato .
5. mushkilada iyo caqabada waxaad ku xalin kartaa waaya aragnimo iyo khibrad lagu daray iimaan iyo xiriir wanaagsan oo kala dhaxeeya bulshada inteeda kale, maxaa yeelay bani`adamku waa bulshawi qof kaligiis noolna majiro.
Qodobadan Raac si aad Uxaliso dhibaatoyinka kula soo Gudboonada
1 Xadey mushkilada ku haysa: marka hore waa in aad ogtahay dhibaatad ku soo wajahday oo aad fahansan tahay taarikhdeeda goorma ayey bilaabatay maxaa usababa iwm, hana u malaynin inaad adiga oo kaliya garan karto dhibaatadaad oo dhan ama aad horay ka fahmi karto waxaa laga yaabaa in aad si tartiib tartiib ah u dareento.
2 Baadi goob xalka ugu wanaagsan: marka aad ogaatid mushkilada waa in aad udagdagtaa sidii aad uxalin lahey raadi xalka aad isleedahay waa ugu haboonyahay xalka hadi aadan si dagdag ah uga gaari Karin isku day in aad si tartiib tartiib ah ujoojiso si aad ula qabsato Siyaasaddada cusub, kuna dheeh istiqfaar iyo ala kacabsi si aadan markale kugu soo laban ayada oo kale .
3 Dooro xalaka aad isleedhay waa ugu wanaagsanyahay marka aad latashato dadka oo aad hesho fikiro iyo talooyin farabadan.
4 Mowduucyad aad ku xalinaysid dhibaatooyin kaaga dhig meesha ay ku habonyahiin oo sida ay isu leeyahiin u isticmaal, una kala hor mari sida ay ukala Muhiimanyahiin.
5 Habdii xalinta dhibaatoyinka ku soo food saara ( ugu horeyn xadey dhibaatada, aruuri macluumaadka laxiriira, markaa ka dib uhel waxyaabahii aad ku bedelan laheeyd, kadibna dooro bedelka ugu wanaagsan , ugu danbeyntina ku xali sida ugu wanaagsan iyo meesh ay quseyso).
6 Mushkiladaha waa ay kala gadisan yahin qaarbaa ah kuwa quseeya ruux kaliya,qaarna waxaa ay ka dhaxeeyaan laba ruux, kuwana waa jamac oo wada taabanaya dad farabadan, mid kasta oo ka mid ah waxa ay leeyahay xal ugar ah
7 Xalka Mushkilada Kooxda waxaa ay u baahantahay hogaamiye, waana in siqota dheer looga baaraandagaa xalka laga qadanayo, Ruuxa hogaan ka loo doranayo waa in lasiiyaa tolo wanaagsan, waxaana lagama maarmaan ah in si qota dheer looga baaraandago mushkiladaha guud inta aysan weynaan.
8 Dajiso qorshe wanaagsan oo aad u raacdo sidii aad uga taqalusi laheyd dhibaatad ku so wajahday, waxa suura gal ah in aad hesho markaa jawi aad ku neefsato oo aad uga baxdo mushkiladii,.
Isha W/D: xafsa Sudi & Ca`isha Sudi (Madaxda) http://newSoomaaliya.webs.com/ca%60isho.htm
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanka_toosinta_shaqsiyadeed&oldid=142895"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 13:15, 28 May 2015.